23 April – Maalinta Caalamiga ee Afka Ingiriiska | Radio Himilo
Home / Maalmaha Caalamiga / 23 April – Maalinta Caalamiga ee Afka Ingiriiska
Posted by: Mahad Mohamed April 23, 2019
Himilo FM– 23 April waa maalin hey’ada QM u qaabilsan dhaqanka, seyniska iyo wax-barashada u aqoonsatay Maalinta Caalamiga ee Afka Ingriiska sanadkii 2010 si loogu dabaal-dego afka Ingiriiska iyo kaalinta uu dunida kaga jiro.
Waa maalin, si kale marka laga fiiriyo, lagu xasuusto dhalashada iyo geerida qoraagii Ingiriis ee William Shakespeare. Waxayna maalintan kamid tahay ku dhawaad lix maalmood oo si caalami ah loo xuso afafka Chinese-ka, Arabiga, Faransiiska, Ruushka iyo Spainish-ka.
Luqadda Ingiriisku waa afka saddaxaad ee aad looga hadlo dunida dacalladeeda. Waxaa jira ku dhawaad 360-400 oo milyan oo ku hadla Ingiriiska. Dalal gaaraya 67 dal ugu yaraan ayaa afka Ingiriiska si rasmi ah looga hadlaa.
Soomaaliya, in kasta oo aysan luqadda koobaad iyo tan labaad aheyn afka Ingiriis, haddana bulshadeennu waxay kamid tahay ummadaha aadka u adeegsada.
Xogaha laga diiwaan-geliyo afka Ingiriiska, kasokow ku hadalkiisa, waa in sannad kasta ku dhawaad kun eray ay kusoo kordhaan. Sida la tilmaamo waxaa jira 12 malyuun oo ah barayaal ama macalimiin dadka bara luqadda Ingiriiska dunida oo dhan. Waxaana lagu naaneysaa luqadda daruuraha waayo waxaa adeegsada duuliyaasha diyaaradaha iyo duullimaadyada caalamiga ah.
Previous: Man Utd oo u dhaqaaqday laacib ammaah kaga maqan Chelsea
Next: Seddex dal oo Afrikaan ah oo qaadanaya tallaalkii ugu horreeyay ee Duumada
Warbaahin raadineysa shaqaale ay lacag ku siiso hurdo
Taariikhda Faaduma Cali Jaamac Nakruumo